Thailand: Nahoana No Nandamoaka Ny Hetsi-panoheran’ny Pitak Siam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2012 3:28 GMT
Ny Pitak Siam (Arovy i Thailand), vondrona manohitra ny governemanta, dia nivoady ny hanetsika olona iray tapitrisa ho eny an-dalamben'i Bangkok tamin'ny 24 Novambra teo, saingy tsy nahavita namory afa-tsy 20.000. Nivadika ho herisetra ilay famoriam-bahoaka ary niparitaka ny olona nony tolakandro, tsy nahatratra akory ny tanjon'izy ireo hanongana ny governemantan'ny Praiminisitra Yingluck Shinawatra.
Araka ny nambaran'ilay vondrona, tsy maintsy esorina eo amin'ny fitondrana i Yingluck noho izy mpanao kolikoly ary ‘saribakolin'i’ Thaksin anadahiny fotsiny, praiminisitra teo aloha tao Thailand izay voaongana tamin'ny 2006. Yingluck koa dia voampanga ho tsy nanaja ny Mpanjaka izay endrika iray lalaina sy tiana eo amin'ny tontolo politika ao Thailand.
Samy nanoratra momba ilay tsy fahombiazan'ny Pitak Siam daholo ireo bilaogera, mpanao gazety sy ny eny amin'ny anjerimanontolo, ary ny fiantraika ara-politikan'ilay hetsi-panoherana.
polisy Thai mpandrava korontana mifanenjana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny hetsi-panoharana nokarakarain'ny Pitak Siam. Sary avy amin'i Piti A Sahakorn. Fizakà-manana @ Demotix. (11/24/2012)
Aim Sinpeng, mpanoratry ny Global Voices dia manipika ny tena anton'ny nandrisika ilay vondrona hanohy hitàna ilay hetsi-panoherana:
Nefa ity famoriam-bahoaka ity tsy momba izay governemantan'i Yingluck akory, na ry zareo Lobaka Mena. Fa ezak'ireo hery tao anatin'ny Lobaka Mavo teo aloha ho fampifandanjàna ny maha-izy azy sy ny toerany ao anaty fiarahamonina Thaï.
Hatreo, nandamoaka tamin'ny lafiny maro ireo famoriam-bahoaka nataon'ny Pitak Siam, na izany resaka fahaiza-mitarika, isa sy fandrindràna amin'ireo vondrona isankarazany. Na izany aza, nitohy ny fanoheran-dry zareo ny “fitondràn'i Thaksin” sy ireo ezaka filofosany fatratra hitazona tsy hihena ny fomba fijeriny ny atao hoe Thailand fitondram-panjaka – mpandàla ny nentin-drazana.
Marobe ireo mpikambana sy mpitarika ny Lobaka Mena no mifamatotra amin'ny Thaksin. Vondrona mpanohitra an'i Thaksin ireo Lobaka Mavo izay nikarakara ireo famoriam-bahoaka goavana tamin'ny 2008
Nick Nostitz dia nandrakotra ilay famoriam-bahoaka sady nizara ireo fomba fijeriny :
Ny rehetra miaraka, nahafaly ahy sady voamariko fa tsy dia ratsy loatra ny haavon'ny herisetra tamin'iny andro iny. Be ny hetsika natao hampakàrana ny tosi-drà, saingy tsy nisy herisetra be nanao ahoana, ary tsy nisy ratra tena henjana raha izay hitako. Voalanjalanja tsara ny valitenin'ny polisy raha ny niheverako azy, sady nanaraka fitsipika, ary hitako fa tsy maintsy nampitombo ny fanazaran-tenany ry zalahy tato anatin'ny taona vitsy lasa. Sady ny herisetra avy amin'ny ankilany mpanao hetsi-panoherana dia tsy dia henjana tahaka izay hitako tanaty fifandonana maro, taona vitsy tany aloha tany.
Andrew Spooner nahatsikaritra ny tsy fahombiazan'ireo tambajotram-baovao maneran-tany tamin'ny fampahafantarana ireo fitakiana ‘tsy demaokratika’ nataon'ny Pitak Siam :
Te-hanontany indray mandeha koa aho ny anton'ny tsy fahombiazan'ireo media iraisam-pirenena tamin'ny fanolorana ny tena zava-misy mikasika ny Pitak Siam. Nataon'ity vondrona ity mazava tsara, naverimberiny sy ampahibemaso, fa ny tanjon-dry zareo dia ny hamotika ny demaokrasia sy ny hampikatso an'i Thailand kanefa tsy nisy iraky ny mpampahalala vaovao avy any ivelany na iray aza nitatitra an'izany …Fa nahoana? Inona no olana amin'ny fitaterana ny zava-misy sasany? Sa ve very ny tena zava-misy satria ireo iraka mpampita vaovao mbola mifikitra mafy amin'ny karazana “fampifandanjàna” mifototra amin'ny “tsy fitanilàna” faran'izay mampiahiahy sy sarintsariny?
Famoriam-bahoaka iray ‘tena ratsy karakara’ ilay izy, araka ny nambaran'ny Bangkok Pundit :
Mety nampahatahotra ny olona ny fanakatonana làlana samihafa nanodidina ilay hetsi-panoherana sy ireo vaovao nandeha nialoha mikasika ny mety hisian'ny herisetra – mety nandrisika ny hafa kosa ho tonga – saingy nisy ve fitantaràna tena azo antoka mikasika ireo olona marobe tsy afaka nanatrika?
Tsy nahatratra ny tanjona ambony napetrany hanonganana ny governemanta ilay famoriam-bahoaka. Nazava tsara fa nanana ny tanjaka ireo mpanao hetsi-panoherana taorian'ny fivoahany betsaka noho izay nandrasany tamin'ny volana lasa, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia tena nila nandrafitra zava-baovao ry zareo… Amin'ity tranga ity, tsy nahatratra ny zava-kinendry ilay famoriam-bahoaka.
Ora vitsy no ilainao handehanana ho tonga any dia izao, mitsefotra ilay izy. Ahoana moa no mbola haharisika anao ho tonga hanatrika ny manaraka? Avy amin'ireo tatitra rehetra ary tamin'ireo kabary re etsy sy eroa, ratsy karakara ilay famoriam-bahoaka ary kabary tsy maharesy lahatra no tao.
The Lost Boy niresaka ny tsy fahombiazan'ilay famoriam-bahoaka :
Tsy manana hevitra tena ijoroanamikasika izay ho fomba hataon'izy ity mba hisian'izany fionganan'ny governemanta izany ilay vondrona , afa-tsy ny fanonganam-panjakana ara-tafika. Nofoanany ny hetsi-panoheran-dry zareo rehefa nirotsaka ny orana ary mazava ho'azy fa tsy nisy olona tonga intsony, izay nitarika ny sasany tamin'ireo nanatrika dia namadika ny hasosorany hifatratra tany amin'ireo mpitarika azy, nampivandravandra ny tsy fisian'ny hamafisan'orin'ilay vondrona.